Mkpọchi COVID-19 ọhụrụ nke Netherland ga-abụ nke mbụ na Western Europe kemgbe ọkọchị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands » Mkpọchi COVID-19 ọhụrụ nke Netherland ga-abụ nke mbụ na Western Europe kemgbe ọkọchị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mkpọchi COVID-19 ọhụrụ nke Netherland ga-abụ nke mbụ na Western Europe kemgbe ọkọchị.
Ndị ọrụ Dutch eweghachilarị ihe mkpuchi ma gbasaa ndepụta ebe ndị chọrọ ngafe COVID-19 iji nweta ohere.
A dụrụ gọọmentị Dutch ọdụ ka ọ weta mkpọchi COVID-19 ọhụrụ izu abụọ na mba.
Gọọmenti Netherlands ga-eme mkpebi maka mkpọchi mba ọhụrụ echi.
Netherlands na-ahụ mmụba n'okwu COVID-19 ọhụrụ yana ọtụtụ ụlọ ọgwụ na-eju ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa.
Mba netherland nwere ike ịbụ obodo mbụ na Western Europe na-amachibido mmachi mkpọchi obodo kemgbe oge ọkọchị nke 2021, ka ọnụ ọgụgụ COVID-19 ọhụrụ na-agbasa na mba ahụ.
Kọmitii ndụmọdụ gbasara ọrịa na-efe efe nke mba, Ndị otu nchịkwa ntiwapụ nke Dutch (OMT), dụrụ ndị ọchịchị Dutch ọdụ ka ha weta mkpọchi akụkụ izu abụọ.
Dị ka akwụkwọ akụkọ obodo si kwuo, a na-atụ anya ka ndị isi oche Prime Minister Mark Rutte mee mkpebi na ndụmọdụ ahụ na Fraịde.
Usoro ndị a na-ekwu na a na-atụle anaghị agụnye imechi ụlọ akwụkwọ, kama ọ ga-agụnye ịkagbu mmemme, yana imechi ụlọ ihe nkiri na sinima. A ga-agwakwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ha machibido oge mmeghe ha.
Na-esochi mkpọchi izu abụọ a tụrụ aro, ịbata ebe ọha ga-abụ naanị ndị nwere koodu QR ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ndị gbakere na nje a na nso nso a.
Akụkọ ndụmọdụ panel na-abịa dị ka Netherlands na-ahụ mmụba n'okwu COVID-19, ebe ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa juputara ọtụtụ ụlọ ọgwụ. Ihe omuma nke October gosiri na 70% nke ndị nọ na nlekọta ahụike enweghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ naanị obere ọgwụ mgbochi. Ọkara afọ nke ndị na-agbaghị ọgwụ mgbochi n'ụlọ ọgwụ bụ naanị 59, ma e jiri ya tụnyere afọ 77 maka ndị ọrịa gbara ọgwụ mgbochi.
Ihe karịrị 84% nke ndị gafere 18 n'ofe Netherlands Enyerela ọgwụ abụọ megide nje a, dịka data gọọmentị siri kwuo.